Yakanakisa mazano ekushongedza iyo yemusoro wemubhedha wako | Bezzia
Yakanakisa mazano ekushongedza iyo yemusoro wemubhedha wako
Pau Heidemeyer | 03/04/2021 16:00 | Musha
Kana iwe uchida kupa yako kamuri kubata kwakasiyana Asi iwe hauzive kuzviita nenzira yakapusa kuti ikupe zvakanakisa mhedzisiro, iwe unogona kuzviita nekugadzirisa iyo yemusoro wemubhedha.
Muchikamu chino tinokuudza maitiro ekuita yako yekurara kuti itaridzike zvakasiyana kungogadziridza iyo yepamusoro yemubhedha wako.
Imba yekurara ndiyo imwe yenzvimbo dziri mumba umo isingabvumire fenicha yakawanda. Chinhu chepakati mubhedha, uchiteverwa nemakabati, mapfekero uye matafura emubhedha. Zvichienderana nemhando yekurara, kana iri yechidiki ichave nedhesiki, kune rimwe divi, dzimba dzekurara huru hadziwanzo dziine zvinhu zvakawanda.
Neichi chikonzero, isu tichave tichiziva iyo yakanakisa mazano ekuchinja iyo yepamusoro bhodhi yemubhedha wako uye nekuzvipa zvakasiyana kubata. Saka, ngatizivei mamwe mazano ekushongedza iyo yemusoro wemubhedha wako uye shandura kamuri rako munzvimbo yako yaunofarira.
Zvichienderana nematanho eimba yako, unogona kuwedzera chigaro chemaoko kana chipfuva chemadhirowa kuzadza chero nzvimbo isina chinhu, zvisinei, hazviwanzo kuitika. Ichi ndicho chikonzero iyo yemusoro yemubhedha yaigona kutora yepakati nhanho uye ndokupa yega kubata.
1 Ita yako yekurara nzvimbo inonakidza kwazvo
2 Sarudza iro rakanakira musoro wemubhedha wako
2.2 Musoro weboardboard
2.4 Nematafura akavakirwa-pamubhedha
3 Pfungwa dzekushongedza iro remusoro wemubhedha wako
3.1 Misoro yepamusoro ine mafuremu emifananidzo
3.2 Anoshanda emusoro
3.3 Misoro yepamusoro ine Wallpaper
3.4 Yakabatanidzwa sherefu kana shefu
Ita yako yekurara nzvimbo inonakidza kwazvo
Izvo zvakakosha kuti urare munzvimbo inonakidza, nekuda kwezvikonzero zvakawanda, asi pamusoro pezvose kuti unakirwe nezvakanaka zororo rakanaka. Iyo bhodhi yepamusoro inogona kuenda kure nzira kuti imba iyoyo ive yakanaka uye inonakidza.
Kana isu tiine inodziya uye inonakidza kamuri isu tichazadzisa akateedzana mabhenefiti: funga zvakajeka, ita nekukurumidza, gadziridza ndangariro uye kuisa pfungwa. Kurara kwakashata hakungokanganisa mashandiro emuviri wedu chete, asiwo kukanganisa hupenyu hwese, hwemagariro, hwehukama nehukama hwemhuri.
Zvekuti imba yako ive neakanakisa mamiriro uye inonakidza sezvinobvira, cherekedza aya matipi:
Sarudza mimvuri inokurudzira runyararo. Pakati pavo pane jecha chiedza toni uye yepasi mavara. Wood inotipa yakawanda yemhando uye inopesana zvakanaka ne beige, bhuruu uye magirini.
Sarudza kuvhenekera ine toni dzakatsvuka uye inoburitsa kunyura kwezuva. Kune izvi iwe unofanirwa kushandisa zvisina kujeka mwenje mumusoro weboardboard.
Shandisa rugs dzakagadzirwa nezvinhu zvine zvinonakidza zvigadzirwa sesiriki kana mvere.
Bhadhara zvakanyanya pamubhedha. Mune ino kesi, mune iyo bhodhi repamusoro, kunyangwe iwe uchifanira zvakare kutarisisa kupindika kwemusana wako uye machira emubhedha akareruka nedonje.
Sarudza iro rakanakira musoro wemubhedha wako
Zviri nyore kwazvo kurasika mune zvakasikwa zvemusoro wemusoro. Mhando dzakasiyana uye dzakawanda dzinokwezva zvekuti tichazoda kuedza dzese. Asi sezvatakataura, tichagara tichifanirwa kuona manyorerwo eimba yedu kuti isapesane.
Kune rimwe divi, pamwe isu tinopa zvakanyanya kukosha kune dhizaini uye aesthetics pane mashandiro eiyo headboard. Ose ari maviri akakosha.
Kana iwe uchida kuti imba yako yekurara iratidzike zvirinani, uye zvakare kuti ive yakachengetedzwa zvakanaka kubva kuruzha, iine mavara akanaka pamadziro uye zvese zvinyaradzo, chengetedza izvi zvinhu mupfungwa.
Izvo zvakakosha kuti utore kuti ndezvipi zvinhu zvakashandiswa mukamuri yekurara. Zvichienderana nezvaunofarira uye bhajeti ivo vanozove erudzi rumwe kana imwe. Iwo emapuranga ndiwo anotipa iwo anonyanya kunzwa kudziya, pachinzvimbo, iwe unogona kushandisa iwo esimbi.
Iyo ibhodhi yepamusoro iyo iri chikamu chemubhedha kana iyo yaunotenga zvakasiyana. Iyo yemusoro uye mubhedha zvinogona kunge zvisina kufanana kana zvisingatsigiraneNekudaro, inogona kugadzira yakanaka kwazvo kuona.
Saka usatombo kunetseka kana yako yemusoro isina kufanana nemubhedha, ndiko kungave iko kubata kunodikanwa nekamuri yako yekurara.
Iwe unogona kusarudza tambo dzepanyama dzakadai sedonje kana rineni, nekuti mhedzisiro yavo iri nyowani. Sezvo mune toni dzechiedza kuti unyatsoenderana nerudzi urwu rwe machira.
Kana iwe ukasarudza synthetic fibers, izvi zvichave nyore kuchenesa uye zvakanyanya kusagadzikana. Kune rimwe divi, avo vane velvet kutaridzika vanozozvipa iyo yakasarudzika uye yakasarudzika kutaridzika. Iwe unogona zvakare kuwedzera mabhatani, senge iwo mabhatani maitiro kana zvihwande pamativi.
Iwe unogona kusarudza bhodhi repamusoro iro ratove nemwenje wetafura yemubhedha wakasanganiswa, izvi zvinopa dhizaini pamwe nekushanda. Chii chimwe, iwe unodzivirira mwenje kubva kutora nzvimbo pamatafura emubhedha.
Pfungwa dzekushongedza iro remusoro wemubhedha wako
Tevere, isu tinokuudza iwe akanakisa mazano ekushongedza iyo yemusoro wemubhedha wako. Nenzira iyi iwe unowana akasiyana maitiro mune yako yekurara nenzira yakapusa.
Misoro yepamusoro ine mafuremu emifananidzo
Iyo ipfungwa yemazuva ano iri kushandiswa zvakanyanya. Mifananidzo, mifananidzo kana mapikicha anoiswa munzvimbo yekuti kwaigona kuenda iro bhodhi repamusoro, rakanamirwa pamadziro. Iko kutarisisa kuchave kuri pamifananidzo.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kusarudza mifananidzo zvakanaka kuitira kuti iyo yese iwirirane.
Iwo akanakisa ekugadzirisa nzvimbo kusvika pakakwirira. Aya mabhodhi epamusoro akavakira-mukati masherufu uye nzvimbo dzekuchengetera, zvichivaita zvakanaka kune avo vane zvinhu zvakawanda mudzimba dzavo. Nekudaro, mukuwedzera, ivo vanozokwanisa kuve nezvose zvatinoda zviripo panguva iyoyo yekuzorora.
Misoro yepamusoro ine Wallpaper
Mune ino kesi, iwe unogona kupurinda chete chikamu chemadziro icho chingaenderana nebhodhi repamusoro kana rusvingo rwese kutsausa chikamu chebhodhi repamusoro nechinangwa chakasiyana. Mune ino kesi, iwe unogona kusarudza pepa rinoenderana zvakanyanya nesitayera yako Sezvineiwo, unogona kuzvichinja kakawanda sezvaunoda chero bedzi ukangwarira paunenge uchibvisa.
Yakabatanidzwa sherefu kana shefu
Iwe unogona zvakare kutsiva yako bhodhi repamusoro nesherufu kana shefu kana akati wandei kuti ushande senzvimbo yekuchengetera. Iwe unogona kugadzira shefu rakabatanidzwa mumadziro kuti uise mapikicha emifananidzo, Dhizaina zvinhu kana zviyeuchidzo. Uye zvakare, unogona kuisa mwenje ipapo kuti usazoshandisa nzvimbo patafura yemubhedha wako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Yakanakisa mazano ekushongedza iyo yemusoro wemubhedha wako